Rugby – «Gold Top 20»: hiatrika ny CCCOI izay tafita amin’ny famaranana | NewsMada
Rugby – «Gold Top 20»: hiatrika ny CCCOI izay tafita amin’ny famaranana
Hanamarika ity faran’ny herinandro ity ny lalao manasa-dalana, hiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara taranja rugby “Gold Top 20”. Hiatrika ny CCCOI ireo ekipa roa tafita amin’ny famaranana.
Ho fantatra rahampitso alahady 19 janoary, etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ireo ekipa roa tafavoaka ka hanao ny famaranana, hiadiana ny ho tompondakam-pirenena, taranja rugby, na ny “Gold Top 20”. Hangotraka ireo lalao ankatoky ny famaranana roa hotanterahina amin’izany dia ny fifandonan’ny TFA Anatihazo sy ny CNaPS Sport, an-daniny ary ny an’ny Cosfa (Bebaoty) sy ny FTM Manjakaray (Dakar), an-kilany.
Ankoatra izay manasa-dalana izay, hanana ny lanjany ihany koa ny fihaonana satria hisolo tena an’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe indianina (CCCOI 2020), ireo ekipa roa tafavoaka eo.
Araka izany, hiendrika famaranana kely avokoa ireo fihaonana ireo. Hanokatra ny lalao ny fifandonan’ny CNaPS Sport, Matsiatra Ambony sy ny TFA Anatihazo (Pilo kely). Tsy mbola nisy teo amin’ny tantaran’ny baolina lavalava ny azy ireo, ary andrasan’ny mpitia baolina lavalava fatratra.
Samy manana ny fomba filalaony ireo ekipa roa ireo. Raha ho an’Anatihazo manokana, ny fampiasana ny “pack d’avant” aloha ny hany tena manavanana azy ireo. Anisan’ireo mpilalao andrin’ny ekipa ry Julio sy Rasta.
Klioba nanao dingan-dava, tamin’iny taon-dasa iny kosa ny CNaPS Sport. Miankina amin’ny mpifanandrina aminy ny taktika entiny izy ireo eny ambony kianja.
Hanala vela ny Bebaoty
Fihaonana miverina kosa ny an’ny Cosfa (Bebaoty) sy ny FTM (Dakar). Ekipa efa diso mifankahalala tsara ny roa tonta, satria tsy vao izao akory no hidona fa efa matetika. Amin’ity, hanala vela amin-dry Mika sy ry Lahatra ny miaramila. Resin’ny FTM teo amin’ny famaranana, niadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina 2019 mantsy ny Bebaoty. Ito izany ny valin’ady ho azy ireo.
Marihina fa samy manana ny fomba filalaony ireto ekipa roa tonta ireto. Ny fampiasana ny “avant”, ny an’ny Bebaoty, raha miainga amin’ny tolotolotra haingam-pandeha kosa ny an’ny Dakar.
Heverin’ny rehetra fa mety ho moka fohy no hivoahan’ny ekipa ho mpandresy, amin’ity.